Mamadika ny seranam-piaramanidina ho lasa vola an'arivony tapitrisa dolara ho an'ny tanàn-dehibe amerikana
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Mamadika ny seranam-piaramanidina ho lasa vola an'arivony tapitrisa dolara ho an'ny tanàn-dehibe amerikana
Airport • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Fitaterana • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny areti-mandringana COVID-19 dia nanisy fihenjanana ara-bola vaovao amin'ny governemanta sasany sy ny fanjakana eo an-toerana. Ny fitaovana iray izay mety hanampy azy ireo hiatrika dia antsoina hoe "fanonerana vola", indraindray antsoina hoe "fanodinana harena amin'ny fotodrafitrasa." Araka ny fanaon'i Aostralia sy ny faritra vitsy an'isa amerikanina, ny hevitra dia ny hananan'ny governemanta hivarotra na hanofa trano ahazoana fidiram-bola, hanokatra ny sandan'ny fananan'izy ireo hampiasaina amin'ny laharam-pahamehana ho an'ny daholobe.
Miorina amin'ny angon-drakitra avy amin'ny varotra seranam-piaramanidina teo aloha sy ny fifanarahana maharitra manerana an'izao tontolo izao, ny fanadihadiana iray dia naneho fa ny seranam-piaramanidina roa lehibe indrindra any Hawaii dia mety mitentina $ 3.6 miliara atambatra amin'ny alàlan'ny fampanofana maharitra any amin'ireo orinasam-piaramanidina tsy miankina sy mpampiasa vola, toa ny FRAPORT fna ohatra.
Hitan'ny fandinihana fa any Hawaii ihany ny seranam-piaramanidina iraisampirenen'i Daniel K. Inouye dia afaka miteraka 2.7 miliara dolara ary ny seranam-piaramanidina Kahului ao Maui dia mety hahazo 935 tapitrisa $ amin'ny alàlan'ny fifanarahana maharitra.
Saingy, manana trosa 2.5 tapitrisa tapitrisa dolara ireo seranam-piaramanidina. Rehefa avy nandoa ny fividianana seranam-piaramanidina misy ny fanjakana, araka ny notakin'ny lalàna federaly ho anisan'ny fifanarahana fampanofana rehetra, ny vola azon'ny fanjakana tamin'ny fampanofana maharitra ireo seranam-piaramanidina roa dia mitentina eo amin'ny 1.1 miliara dolara.
Araka ny lalàna mifehy ny seranam-piaramanidina federaly amerikana, ny tompon'ny seranam-piaramanidina dia tsy mahazo mandray vola miditra amin'ny seranam-piaramanidina; ireo vola miditra rehetra ireo dia tsy maintsy tazonina eny amin'ny seranam-piaramanidina sy ampiasaina amin'ny tanjona seranam-piaramanidina. Any ivelany, tsy misy fameperana toy izany. Nandritra izay 30 taona lasa izay dia governemanta maro no nanangana orinasam-panjakana seranam-piaramanidina lehibe sy salantsalany ary nahazo tombony ara-bola mivantana avy amin'izany.
Tamin'ny taona 2018, ao anatin'ny lalàna manome alalana ny Federal Aviation Administration, ny Kongresy dia namorona fanavakavahana manan-danja amin'ny fameperana efa ela. Ny fandaharan'asa vaovao momba ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fampiasam-bola amin'ny seranam-piaramanidina (AIPP) dia ahafahan'ny tompon'ny seranam-piaramanidina miditra amin'ny fifanarahana fiaraha-miombon'antoka amin'ny fanjakana-tsy miankina maharitra (P3) ary hampiasa ny vola azo amin'ny fampanofana ara-bola ho an'ny tanjon'ny governemanta ankapobeny.
Ity fikarohana ity dia manadihady ny mety ho fampanofana fiarahamiasa ho an'ny daholobe sy seranam-piaramanidina ho an'ny seranam-piaramanidina hub lehibe sy antonony miisa 31 izay fananan'ny governemanta, tanàna, ary fanjakana. Izy io dia mandray amina data avy amina am-polony maro ny seranam-piaramanidina mpiaramiombonan'ny seranam-piaramanidina any ivelany tato ho ato mba haminavina ny tombam-bidin'ny 31 amin'ireo seranam-piaramanidina XNUMX mety ho mendrika an'ireo mpampiasa vola.
Ny tombam-bidiny dia mety ho mendrika amin'ny seranam-piaramanidina eo amin'ny tsena manerantany. Ny tombam-bidiny dia mitaky ny kaody amerikana momba ny haba izay mitaky ny fanefana ny fividianana seranam-piaramanidina raha misy fanovana fanaraha-maso, toy ny fampanofana maharitra. Noho izany, ny tombam-bidin'ny sandam-bola dia ny sandam-bola marobe ary mihena ny sandan'ny fividianana seranam-piaramanidina miavaka.
Satria tsy fahita firy ny fampanofana seranam-piaramanidina P3 any Etazonia (ny hany seranana misy dia ny seranam-piaramanidina San Juan, Puerto Rico), ny fanadihadiana dia manazava sokajy telo mety ho mpampiasa vola ao amin'ny seranam-piaramanidina amerikana.
Voalohany dia tontolon'ny seranam-piaramanidina manerantany izay mitombo, ao anatin'izany ireo vondrona seranam-piaramanidina dimy lehibe indrindra manerantany, izay miasa ampahany mitombo amin'ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra manerantany amin'ny fidiram-bola isan-taona.
Ny faharoa dia ny volan'ny famatsiam-bola amin'ny fotodrafitrasa marobe, izay nanangona vola amina miliara an'arivony maro hampiasana ho fananam-bola amin'ny fotodrafitrasa ampiasain'ny privatéalité sy P3 manerantany.
Ny sokajy fahatelo dia ny volan'ny fisotroan-dronono ho an'ny daholobe, izay manitatra tsikelikely ny fampiasam-bolan'izy ireo amin'ny fotodrafitrasa ho fanodinana ny fihenan'ny tahan'ny tamberim-bidy amin'ny ankapobeny.
Ireo karazana mpamatsy vola rehetra telo ireo dia manana faravodilanitra maharitra ary mahazo aina amin'ny fampiasam-bola ary mampivelatra ireo karazana fananana ireo.